Etu ị ga -esi ahọrọ nsacha ezé kwesịrị ekwesị maka nwa gị | Bezzia
Otu esi ahọpụta nsacha ezé kwesịrị ekwesị maka nwa gị
Maria José Roldan | | Na-akụziri ụmụaka ihe
Otu n'ime omume ụmụaka kwesịrị ịmụta site na nwata bụ ịta ikikere ezé. Inwe ezigbo ahụike na ahụike bụ isi ihe iji zere nsogbu ahụike n'ọdịnihu. Maka ịdị ọcha ọnụ nke ọma, ọ dị mkpa ịnwe nsacha ezé dabara na nke obere.
Ndị nne na nna kwesịrị ịma na ọ bụghị nsí nsí niile bụ otu na Ịhọrọ nke ziri ezi maka ụmụ gị bụ isi ihe na -eme ka enwe ezé ahụike nọ n'ọnọdụ zuru oke.
Igodo mgbe ị na -ahọrọ nsacha ezé kwesịrị ekwesị maka nwa ahụ
Ntucha eze kwesịrị ịdị iche na -adabere n'afọ nwata ahụ. Ntucha eze maka nwatakịrị dị afọ abụọ na nke onye dị afọ 8 abụghị otu. Ndị nne na nna kwesịrị ichebara ọtụtụ akụkụ echiche mgbe ha na -azụrụ nwa ha ahịhịa kwesịrị ekwesị.
N'ọnọdụ ụmụaka sitere na 0 ruo 3 afọ, ezigbo nsacha ezé kwesịrị inwe obere isi, bristles kwesịrị ịdị nro yana aka ergonomic nke na -enye ndị nne na nna ohere ịsacha ezé. N'ọtụtụ ikpe, ndị nne na nna ga -ahụ maka ihicha ezé ụmụ ha, n'agbanyeghị na n'ime afọ gara aga, ọ dị mma ka ụmụaka mara brushes ahụ. Akụkụ ọzọ ị ga -eburu n'uche bụ na a ga -eji ahịhịa dị nro mee ahịhịa ahụ, ebe ọ bụ na nwatakịrị nwere ike ịta ya n'oge ọzọ.
N'ihe gbasara ụmụaka dị n'agbata afọ 3 na 6, nsacha eze ahụ nwere ike ịnwe isi buru ibu na aka ya ka ọ sara mbara. N'oge afọ a, nwata ahụ enweela ike ịcha naanị ezé, n'agbanyeghị na ọ dị mma na nne na nna na -anọ ya oge niile iji hụ na ha mere nke ọma. Ọtụtụ ndị nne na nna na -ehie ụzọ nke ukwuu inye nwa ha nsí ezé eletriki n'oge ndị a., n'enweghi ike iji ha nke ọma.
N'ọnọdụ ụmụaka karịrị afọ 6, ha kwesịrị inwe ike ihicha ezé ha nke ọma na enweghị enyemaka nne na nna ha. Ọ bụrụ na ha na -amalite ịkpa agwa kemgbe ha dị obere, ha agaghị enwe nsogbu ma a bịa n'ịdị ọcha nke ọnụ. Ndị ọkachamara na -adụ ọdụ ka ha jiri nsí ezé eletrik malite na afọ 8 ma ọ bụ 9, ebe ọ bụ na site na afọ ndị ahụ, ha enweela ike iji ha na -enweghị nsogbu ọ bụla.
Na nkenke, ọ dị oke mkpa na ndị nne na nna kụnye n'ime ụmụ ha site na nwata, mkpa ịdị ọcha ezé dị mma. Enweghi agwa a nwere ike ime ka nwa ahụ leghara nhicha ezé anya wee nwee ike nweta nsogbu ụfọdụ dịka oghere. Ịhọrọ nsí ezé kwesịrị ekwesị bụ isi ihe dị mkpa iji mee ka ezé na ọnụ gị bụrụ ọnọdụ zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Na-akụziri ụmụaka ihe » Otu esi ahọpụta nsacha ezé kwesịrị ekwesị maka nwa gị
Chọpụta ihe na -eme ugbu a na vinyl flooring